कलियुगका कुरा: October 2010
हैजा फैलाएको आरोप नेपाली सेनालाई
कतिसम्म आरोप लाका हुन् के नेपालीलाई। यहाँ देशाँ लामखुट्टेले डेँगे फैलार टेन्सन दि'राका बेलाँ हैटीमा फैलिएको हैजाको आरोप पनि शान्ति सेनामा गएका नेपाली सेनालाई पो लगाएछन् यार....साँच्चै हो कि हेपेको हाम्लाई.....। लउन जान्ने बुझ्नेले छानबिन गर्न परो।
नेतालाई बोल्नमा प्रतिबन्ध
विपश्यना गएर आएपछि थाहा भयो। जीवनमा ९५% त हामी बोल्नै नपर्ने बेलाँ बोलिरहेका रहेछौं र बोली रहनेछौं.... नागरिक दैनिकको अन्तरवार्तामा जगदीश घिमिरेले भनेको कुरा सारै चित्त बुझ्यो। अश्लिल साइटहरु होइन नेताहरुको बोलीमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ। यो देशमा नेताहरु मात्र अत्यावश्यक बाहेक अरु बेला नबोलिदिने हो भने धेरै शान्ति पाइन्थ्यो होला...
मरेको नामका खसी
खाद्य संस्थानका हाकिमका तिर जान लाको। यसो खुशी पारेर साथी बनाउन सकियो भने दशैंमा खसी उपहार आउने रैछ नि। यसपाली दशै‍ त किनेर ल्याइयो। अर्कोपटक दशैंमा खसी आएपनि त गणित अलिकति बच्छ नि। संस्थानको रिपोर्टाँ मरेको खशीमा राख्दिए भैहाल्नेरैछ त। यसपटक दशैंमा मात्र अढाई सय जति मरे भनेछन् रिपोर्टाँ। यसपटक कसकसले मरेको नामको खसी खाए होला...
विपश्यनाको १० दिने आर्यमौन पछि दुई चार दिने इन्टरनेट मौनमा छु है साथीभाइ। अन्य काम थुप्रियाछन्। ती नसकिन्जेल इन्टरनेट मौन बेला बेलाँ मात्र तोडिन्छ। धेरै बातचित गरिन भनेर चित्त नदुखाम है...
कम्प्युटर एसोसियसनमा खोई समावेशी
यो कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल क्यान भन्ने संस्थालाई मुद्दा हाल्दिन पर्छ कि के हो। यस्तो समावेशी जमानाँ नि, २३ जना नयाँ कार्यसमितिआँ जम्मा एक जना मात्र महिला छन् यार। अरु कुराँ त पछि पार्याथे पार्याथे प्रविधिआँ नि महिलालाई नै पछाडि पार्या रचन्....
दशैंका बेला चिट्टा बेच
ए स्कूलहर्ले दशैं बिदाँ नयाँ होमवर्क पनि दिन थालेछन् नि 'चिट्टा बेच्ने'। छिमेकीको छोराले सय रुपैयाँ जाने पचास वटा टिकट बोकेर आ'छ। पाँचवटा किन्दिन पर्ने रे। बोर्डिङ स्कूलहर्ले हो है पैसा कमाउन जानेका। केटाकेटीलाई चिट्टा समेत बेच्न लगाउन थाले। हैन कहाँट आउँछ हो तिन्लाई यस्तो बुद्धि सकिन्न प्रभु यिनीहरुसँग....
ल मुलुक तपाईहर्को जिम्मामा भो है। आफू त लाइयो आजट विपश्यना तिर....आर्यमौन। यत्रो बर्ष बोलेर, लेखेर, पढेर, इन्टरनेट चलार, मुबाइल बोकेर केही उपति लाइएन त। बा अब १० दिन तीबाट टाढा बस्दा केही भइहाल्छ कि....
दशैंका बेलाँ बास्ना आउने चामलकै भात खान परो भो भनेर खाद्य संस्थानबाट बास्मती चामलको 25 किलोको बोरा ल्याएँ। बास्ना त आउने तर हकुवा चामलको जस्तो बा; सात चोटी पखालेर पकाउँदा नि। चार वर्ष जति पुरानो चामल परेछ कि क्याहो। अन्तभन्दा सस्तो पाइयो भनेर संस्थानको चामल ल्या नराम्ररी फसियो। सस्तो बेसाहा पेटलाई मर भनेको त सुनेको हो नटेर्दा....
खसीलाई हैन खसीले खाने भो
दशै‌मा खसी आफूले खाने होइन खसीले पो आफूलाई खाला जस्तो भो त। रातरातभर कराउँछ सुत्न दिँदैन। दिनाँ तीनचोटी घाँस खुवाउन चराउन लान पर्ने, दुई मुठा घाँसको व्यवस्था। बेलाँ पानी खुवाउनुपर्ने। छत फोहर पारेर बिजोग छ। डर त छतट हामफालेर मर्छ कि भन्ने भो। दुई फिट अग्लो छतको पर्खाल माथि अगाडिका दुई खुट्टा उचालेर हैरान पारेपछि एकजना ...धराले बस्न पर्याछ। (हाँस्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
खसीलाई होइन खसीले खाला जस्तो भो
नक्कली विद्यावारिधी फिर्ता
मह जोडीले झुक्किएर विद्यावारिधीको उपाधि लिइएको भनेर लज्जाबोध गर्दै माफ मागेपछि भाइले सोध्दैछ- केपी ओली र विजय गच्छदारले नि विद्यावारिधी फिर्ता गर्लान् त ? अझै पनि नेपाली नेताहर्बाट नैतिकताको आश गर्नेहरु छन् है यो देशाँ ...(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा....)
महान मान्छे जन्मेकै दिन जन्मदैँमा कोही मान्छे ठूलो हुँदोरहनेछ त। महात्मा गान्धी पनि अक्टुबर २ मै जन्मेका दीपक भट्टराई पनि त्यही दिन। तर कहाँ राजभोज कहाँ गंगोतेली (आजभोलि उखान प्रयोग गर्दा अलिक होस गर्नुपर्ने यो उखानले कसैलाई त होच्याउँदैन होला त। अस्ति नै ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भन्दा गोतामेले धन्नै गोदेका थिए).... ...मैले लुकाएको बर्थडे पनि साथीहर्ले पत्ता लगाएर शुभकामना दिनुभो। म आभारी छु।
बिजुलीका मिटर फाल्ने भए सडकमा
अब क-कल्ले घरबाट बिजुलीको मिटर झिकेर सडकाँ थेचार्ने भए। विद्युत प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी भन्यो नि त-बिजुलीको भाउ तीस प्रतिशत जति बढाउने भनेर। अझ सात वर्षसम्म लोडसेडिङ गर्दिइरहन्छ रे प्राधिकरणले अनि यसपाला हिउँदाँ त १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ। म त त्यस्तो झ्वाँकी छैन मिटर सडकाँ फाल्न..कसैले फाले भने फेसबुकाँ लेख्दिम्ला। जय लोडसेडिङ...
जिल्ला भाग लगाइदिन परो आइएनजिओ हरुलाई
यसो हिसाब निकालेको नेपालाँ आइएनजीओ/एनजिओले प्रत्येक जिल्लालाई २९ करोड र प्रत्येक गाविसलाई ५० लाख भन्दा धेरै रुपैयाँ बाड्न पुग्ने रकम एक वर्षाँ खर्चदारचन। आइ/एनजिओले तेत्रो खर्चदाँ नि किन हो के विकास नभाको। बरु यो आइ/एनजीओहर्लाई एउटा एउटा जिल्ला भाग लगाइदिएर विकास गर्न कम्पिटिसन गर्दिने हो कि? नभए त जैसा खाए वैसा गया भने झैं भइरह्यो के। एनजीओ विरोधी भन्ने पो हो कि यो सल्लाह दिदाँ...
कति पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव
भन्न त नहुने तर तीन पटक भन्दा धेरै प्रधानमन्त्रीमा हारेका व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन नपाउने नियम नबनाएसम्म देश प्रधानमन्त्रीकै चुनावमै अलमलिने भो। त्यहाँट माथि नपुग्ने भो भन्ने लागेको त हो तर यसो घोरिँदा त्यो नि राम्रै हो भन्ने लाग्यो। देशको नाम एउटा त रहन्छ नि विश्वमा सबैभन्दा धेरै चोटि प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने देश कुन हो भनेर हाजिर जवाफमा आउन सक्छ- नेपालको नाम। गिनिज बुकाँ नि नाम राख्न मिल्ला...ठोक है ठोक चुनाव ठोक। कस्तो लाग्यो? 0
विचारै गर्न त पैसा लाग्दैन..
स्कुटर किन्ने विचार गर्या कति पैसा लाग्छ भनेर एउटा साथीलाई सोध्या। जवाफले मुखै थुन्दियो-विचार मात्र गर्न पैसा लाग्दैन रे। मलाई खुशी लाग्यो। मलाई चिन्न थालेछ येल्ले नि। मेरा धेरै योजना विचार भन्दा पर पुग्दैनन् त। (हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)